မှိုလူမီနီယမ်ပန်းကန် | YK လူမီနီယမ်
မှိုလုပ်ငန်းအခြေအနေများသည်ရှုပ်ထွေးသည်, ထို့ကြောင့်မှိုပစ္စည်းသည်အပူချိန်မြင့်ရန်ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, ဝတ်ဆင်ခုခံ, ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူပါ. အလူမီနီယံအလွိုင်းသည်လက်ရှိအသုံးများဆုံးမှိုပစ္စည်းဖြစ်သည်. ၎င်းနှင့်ပြုလုပ်သောမှိုသည်ပေါ့ပါးသည်, ကောင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်. မှိုအဖြစ်အသုံးများသောသတ္တုစပ်များသည်2စီးရီး,5စီးရီး,6စီးရီး, နှင့်7စီးရီး, အတွင်းခံပုံစံခွက်များအတွက်သုံးနိုင်သည်, ဖိနပ်မှို, စသည်တို့.
မှိုများအတွက်အသုံးများသော Aluminium Alloy အမျိုးအစားများ
ဟိ2series လူမီနီယံပြားသည်အလူမီနီယံနှင့်ကြေးနီအလွိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်, ယေဘုယျအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် 97% အလူမီနီယံနှင့် 3% ကြေးနီ, hardness အလွန်မြင့်မားသည်, ဆန့်နိုင်အား, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့အဖြစ်မများပါဘူး.5series aluminium plate သည် aluminium magnesium alloy ကိုပိုင်ဆိုင်သည်, အဓိကဝိသေသလက္ခဏာမှာသံချေးတက်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သည်, မှိုအလွိုင်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်မကြာခဏသုံးသည် 5083 လူမီနီယံပန်းကန်, 5052 လူမီနီယံပန်းကန်.6စီးရီးအလူမီနီယံပြားသည်အလူမီနီယမ်-မဂ္ဂနီဆီယမ်-ဆီလီကွန်အလွိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်. ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်တိကျသောမှိုများထုတ်လုပ်ရန်အဓိကပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. အတွက်သုံးနိုင်ပါတယ် 80% ဆေးထိုးမှိုကဲ့သို့ကွဲပြားသောမှိုစက်ရုံများတွင်ထုတ်ကုန်များ, မှို, ဖိအားနည်းသောပုံစံခွက်များ, ရော်ဘာမှိုများ. ၎င်းသည်အသုံးများသောမှိုအလူမီနီယံပြားဖြစ်သည်. T5 နှင့် T6 တို့သည် 6082 အလူမီနီယံပြားများသည်ကောင်းမွန်သောစက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူမှိုများအတွက်သင့်တော်သည်. ယေဘူယျအားဖြင့်, မှိုများကိုအလယ်အလတ်အလူမီနီယံပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. 7-series လူမီနီယံပြား၏အဓိကအလွိုင်းဒြပ်စင်များမှာဇင့်နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်တို့ဖြစ်သည်, ၎င်းသည်အလွိုင်းပေါ်တွင်ခိုင်မာအားကောင်းစေသောအာနိသင်ရှိသည်. အချိုးအစားတိုးလာသည်နှင့်အမျှအလွိုင်း၏ဆန့်ထွက်အားနှင့်အထွက်နှုန်းကိုတိုးစေသည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, 7-စီးရီးအလူမီနီယံပြားသည်လေကြောင်းနှင့်အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသောပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်.
Aluminium Mould ၏အားသာချက်များ
1.အလေးချိန်ပေါ့, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏သိပ်သည်းဆသည်သာဖြစ်သည် 36% အထွေထွေမှိုသံမဏိ၏, ဒါကြောင့် motion inertia ကအတော်လေးနည်းပါတယ်, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၌မြန်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်နှင့်လျှော့ချရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်, စက်နှင့်မှိုများဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်, နှင့်မှိုပုံပျက်ရန်လွယ်ကူသည်.
2.ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်, မြင့်မားသောရှုထောင့်တည်ငြိမ်မှု, တိကျတဲ့အထူသည်းခံစိတ်, နှင့်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်မှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်. ၎င်း၏ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်းသည်ပိုများသည်6သာမန်မှိုသံထက်အဆများစွာပိုမြန်သည်, မှိုထုတ်လုပ်ငန်းအချိန်ကိုသက်သာစေပြီးထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်.
3.အပူစီးကူးမှုကောင်းသည်, အပူသို့မဟုတ်အအေးပေးချိန်၌ပုံစံခွက်ကိုကယ်တင်နိုင်သည်, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်.
4.ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်, ဓာတ်တိုးမှုဒဏ်, အရောင်တင်ရလွယ်ကူသည်, ငွေရောင်တောက်ပသောငွေရောင်ရှိသည်, လှပပြီးတာရှည်ခံသည်.